Mohammad Bin Salman oo ku cadaadinaya milkiilayaasha Old Trafford inay 4.9 bilyan oo dollar kaga iibiyaan Manchester United – Gool FM
Samuel Eto’o oo doortay kan fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, inkastoo uu jawaabo is-gafsan bixiyey!
Tababare Jurgen Klopp oo xiddigihiisa kaga cabsi qaba Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid
Arsenal waa kooxda kaliya ee Premier League oo weli guuldarro la’aan ah sanadkan 2020 tartammada oo dhan
Thomas Muller: “Chelsea ma’ahan waqti xaadirkan Kooxda ugu fiican Yurub”
Karim Benzema oo ammaanay Macallin Pep Guardiola iyo Kooxdiisa Man City ka hor kulankooda Arbacada
RASMI: Hakim Ziyech oo heshiis shan sano ah u saxiixay Kooxda Chelsea
“Arsenal waxay u baahan tahay waqti si ay ula qabsato Falsafadeyda” – Mikel Arteta
Mohammad Bin Salman oo ku cadaadinaya milkiilayaasha Old Trafford inay 4.9 bilyan oo dollar kaga iibiyaan Manchester United
Haaruun February 17, 2019
(Manchester) 17 Feb 2019. Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in dhaxalsugaha Boqortooyada Sucuudiga Mohammad Bin Salman uu ku rajo weyn ahay in riyadiisu u rumoowdo isagoo milkiilayaasha Manchester United ku cadaadinaya in ay ka iibiyaan naadigaasi.
Ilo wareedyo laga helayo gudaha Old Trafford ayaa sheegaya in Mohammad bin Salman uu ku cadaadinayo qoyska reer Glazer ee iska leh Manchester United inay kaga iibiyaan naadigan lacag gaaraysa 3.8 bilyan oo giniga istarliinka ah (4.9 bilyan oo dollar).
Reer Glazer mar walba waa ay dafiraan inay iska iibinayaan Manchester United, balse dalabka caynkan ah ayaa noqonaya mid faa’iido badan ku jirto oo ay adag tahay in si sahal ah lagu diido.
14 sanadood ka hor ayaa reer Glazer waxa ay (790 milyan oo gini) kula wareegeen Manchester United, waxaana haddii ay iska iibiyaan kooxda oo ay dalabka ka guddoomaan Mohammad bin Salman oo 33 jir ah ay noqonaysaa in ay faa’iidi doonaan 2.2 bilyan oo bilyan oo Pound.
Tababare Solari oo ka hadlay guuldaradii lama filaanka ahayd ay kala kulmeen kooxda Girona
Ousmane Dembele oo ka digay halista kooxda Lyon, isagoo dhinaca kale amaanay saaxiibkiis Lionel Messi